"The GLMatrix" ကိုဟက်တာ Linux မှ
« The GLMatrix »ကိုဟက်ကာလုပ်ခြင်း
ကုန်သည်ကြီး | | အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင်, applications များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ငါ့အတွက် ဒုတိယ post.. .. ငါ (တချို့ကအတော်လေးအသုံးမကျဟုထင်ရမည့်အရာတစ်ခုခု) ကိုသင်ပြမယ် အရောင်ပြောင်းပါ ငါ့အကြိုက်ဆုံးဖန်သားပြင် (Screensaver, Screensaver) ၏ နေပြည်တော်, GLMatrixအကယ်၍ သင်မသိပါကလှပသော 3D effect များနှင့်အတူ Matrix စတိုင်ရှိမော်နီတာမှ ဖြတ်၍ သွားသောပုံမှန်သင်္ကေတများ၏ Simulator တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီမှာပုံတစ်ပုံ
ငါစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတာကငါ့ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအနက်ရောင်နဲ့အပြာရင့်ရောင်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားတယ် Arch Linux ကို .. (ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အပြာရောင် backlit keyboard xD နှင့်ကြည့်ကောင်းသည်) .. .. ပုံမှန် အစိမ်းရောင်အရောင် Matrix ၏, ငါ့ကိုမပေါင်းစပ် (သို့မဟုတ်တ ဦး တည်းကဒီမှာနှင့်ကလေးများအကြားပြောသကဲ့သို့, ကပင်ချွဲနှင့်ထိမှန်ပါဘူး) ။
ဒီအောင်မြင်ဖို့ငါတို့လုပ်မှာပါ ရောက်နေပြီ xscreensaver ၏ source code မှာအတွေ့အကြုံမရှိသူကိုထိတ်လန့်မနေပါနဲ့၊ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လမ်းညွှန် သူတို့အဲဒါကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့၊ ငါပြောချင်တာကငါဝါးနေတဲ့အရာတွေကိုငါမစွန့်ခွာဘူးလို့ငါပြောချင်တယ် အကြံဥာဏ်ကသူတို့သောက်စရာယူပြီးလက်ကိုတင်တာပဲကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိ။
မှတ်ချက် - ကျွန်ုပ်သည်ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပါ။ မည်သည့်အမှားမျိုးကိုမဆိုကျွန်ုပ်အားပြောပြပါ။
1 ၁- xscreensaver ၏ source code ကို download လုပ်ပါ။
1.1 2- သင်၏မှီခိုမှုကိုစစ်ဆေးပါ။
2 ၃။ မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုပါသည်။
3 4- ပြင်ဆင်ရန် /hacks/glx/glmatrix.c
4 ၅။ xscreensaver အသစ်ကိုပြုပြင်ထားသော glmatrix နှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းသည်။
5 ၆ ။
6 7- ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အချို့ဥပမာ။ (အကြံပြုချက် +)
၁- xscreensaver ၏ source code ကို download လုပ်ပါ။
ကျနော်တို့ xscreensaver စာမျက်နှာထဲသို့ဝင်နိုင်ပါတယ်, နှင့် ငါတို့ download ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း source code ကို (အရင်းအမြစ်ကုဒ်) ။
ဒါမှမဟုတ်ငါတို့လုပ်နိုင်တယ် တိုက်ရိုက် download လုပ်ပါ မှ ဂိတ် နှင့် wget သည်အမြဲတမ်းသိ အဲဒါဗားရှင်း, ဒီကိစ္စမှာ 5.20:
ငါတို့ unzip လုပ်တယ်
ငါတို့မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုစစ်ဆေးသွားမှာပါ လိုအပ်သော packages များ xscreensaver ကိုသုံးလို့ရတယ်။ ဤအတွက်အကျွန်ုပ်တို့သည် 'configure' ကိုအသုံးပြုမည်။။ မဖြစ်မနေ အာရုံစိုက် ထွက်ပေါက်မှာoutput ကို) သူတို့ကငါတို့ပေးရင်ငါတို့ပေးတယ် တချို့အထုပ်ပျောက်နေသည်, သို့မဟုတ်မဆိုရှိသေး၏ အမှား။ အထုပ်တစ်ခုပျောက်ဆုံးနေပါက၎င်းကိုရှာဖွေ။ ၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ (၎င်းသည်အရသာနှင့် distros များပေါ် မူတည်၍ synaptics, apt, pacman, စသဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်) ။
- အသစ်စက်စက် unzipped ဖိုင်တွဲကိုရိုက်ထည့်ပါ။
အဘယ်သူမျှမအထုပ်ပျောက်ဆုံးနေသည်မဟုတ်, ရှိပါက အမှားမရှိဘူး; ကျနော်တို့မှဆက်လက်ဆောင်ရွက် install xscreensaver ကမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည်ကိုစစ်ဆေးရန်။
မှတ်ချက်။ make သည် .c (code) မှ .o (executables) မှဖိုင်များအားလုံးကိုထုတ်လုပ်သောကြောင့်၊ များသောအားဖြင့်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသည်။
အသုံးပြုသူတစ် ဦး အဖြစ်, လုပ်အတွက်အမှားအယွင်းများရှိပါတယ်လျှင် 'root' ငါတို့ထည့်သွင်းလိုက်သည်
မှတ်စု: အဘယ်သူမျှမ ဒီ command တွေကိုဘာလုပ်သလဲဆိုတာနားမလည်တဲ့သူတွေအတွက်အသေးစိတ်ရှင်းပြသွားမှာပါ။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် compiler နှင့် Makefiles ကိုရှာဖွေပါ။
4- ပြင်ဆင်ရန် /hacks/glx/glmatrix.c
သူတို့ကသူတို့နှင့်အတူစကားပြောပါလိမ့်မယ် စာသားတည်းဖြတ်သူ ကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့သည့်အကြိုက်ဆုံး (vim, nano, gedit, စသည်တို့) ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်မည့်ဖိုင်:
သူတို့ကတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်ရှိသည် ပိတ်ဆို့ အောက်ပါတို့နှင့်အတူ ပုံသဏ္ဌာန်:
၎င်းသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လိုင်း ၇၆၀ တွင်တည်ရှိသည်။ သို့သော် "a = g" ကိုရှာဖွေခြင်းသည်ချက်ချင်းရှာဖွေသင့်သည်
Y ငါတို့ပေါင်းထည့် လိုချင်သောအရောင်အောက်ပါအတိုင်း:
ဖြစ်ခြင်း RGB hexadecimal (နီ - အစိမ်း - အပြာ)
ဥပမာအား၏ဝိသေသအပြာ Arch Linux ကို သူလား # 1793D1ကျန်ရှိသော
ဆ = 0x93;
ခ = 0xD1;
၅။ xscreensaver အသစ်ကိုပြုပြင်ထားသော glmatrix နှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းသည်။
ဒီနေရာမှာငါတို့ကဲ့သို့လက်တွေ့ကျကျပြုလိမ့်မည် အမှတ် ၉, ဒါပေမယ့်ဒီအချိန်ကျနော်တို့လုပ်အပြောင်းအလဲများကိုဖမ်းယူဖို့။
အသုံးပြုသူအဖြစ်အမှားအဘယ်သူမျှမမျိုးကိုထွက်ထွက်လာလျှင် 'root' ငါတို့လုပ်သည်
မှတ်ချက်။ ။ အချို့သောအခြေအနေများတွင် Preview နှင့်၎င်းလည်ပတ်ချိန်တွင်ပြောင်းလဲမှုများအကျိုးသက်ရောက်စေရန်ကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်စတင်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
အရသာအတွက်ပြင်ဆင်ပါ .. နှင့် ပျော်တယ် ????
7- ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်အချို့ဥပမာ။ (အကြံပြုချက် +)
hexadecimal အရောင်: # 9F03D9
hexadecimal အရောင်: # D41213
hexadecimal အရောင်: # E5E311
အကြံပြုချက်: သိရန် အရောင် en hexadecimal ငါသုံးတယ် GIMP, ငါတို့အဖြစ်အရောင် palette ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပုံ "HTML သင်္ကေတ"။ ငါတို့သည်လည်း '' နှိပ်နိုင်ပါတယ်o'နှင့် Hex ၏အရောင်သည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသိရန်ပုံ၏အရောင်ကိုယူပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အသွင်အပြင် / ကိုယ်ပိုင် » « The GLMatrix »ကိုဟက်ကာလုပ်ခြင်း
အဆိုပါ debianite merlin ဟုသူကပြောသည်
merian အဆိုပါ debianite မှတုံ့ပြန်ပါ
RAW အခြေခံ ဟုသူကပြောသည်
မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ..it ကတော့ဂန္ထဝင်ပါ။
ဒါပေမယ့်ဒီဟာက (အနည်းဆုံးတော့၊ ငါ့အတွက်) ရယ်စရာအကောင်းဆုံးအရာကငါ့ကိုဘာကြောင့်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တာလဲ .. ..is ရှေ့မှာ code အရင်းအမြစ်ရှိခြင်းကိုသိခြင်းက“ ငါ့မှာ Linux ရှိတယ်၊ ငါဘယ်လိုပြောင်းလဲချင်လဲ” ဆိုတာနဲ့တူတယ်။ ။ ။ ..may ဌ! .. "..
ဖတ်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် .. 😉
မူလတန်း (သို့) ရိုးရှင်းသည့်အရာတစ်ခုကိုဖန်သားပြင်တစ်ခုအရကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုစုစည်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းခြင်းစသည့်အတန်းအစားတစ်ခုလုံးကိုဖန်တီးလိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူး။ ရသောအလွန်ကောင်းသည့်ဆောင်းပါး။
Mr. Linux ကိုပြန်ပြောပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! .. .. သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။
ငါ့အတွက်တော့ဒါကအတော်လေးသင်ယူစရာ Odyssey ပါ။ ) ..
$ sudo pacman -S xscreensaver ဖြစ်သည်
မည်သည့်အပိုင်းအတွက် .. .. .. အကယ်၍ သင်သည် Arch..yes ကိုသုံးသည်ဆိုပါက၎င်းသည်အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိကိုစစ်ဆေးရန်အချက် ၂ နှင့် ၃ ကိုရည်ညွှန်းပါက ....yes ကိုအသုံးပြုပါက၎င်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲအမြဲတမ်းရှိသောကြောင့် ..but for အခြား distros အတူတူမကျမည်အကြောင်း ..
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ .. source code ကိုသင် download မလုပ်ခဲ့လျှင် .. ဒီအရောင်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ဘူး .. ဒီ post ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ..
အစွန်အဖျား ^ _ ^ များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ 8 လအတွင်း
Live CD / USB မှ Linux ကို boot လုပ်ရန် BIOS settings ကိုမည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း
(ဘရုစ်ပဲန်းစ်၏) Aaron Swartz သေဆုံးခြင်းအကြောင်း